Halatra vola tao amin’ny PM : Nipoitra ny marina, lainga no naelin’ireo mpanohitra
03/05/2018 admintriatra 0
Na dia niniana naely tetsy sy teroa aza ny lainga marivo tototra sy noforonin’ireo mpanohitra mahakasika ilay vola very tao amin’ny praiminisitra, nivoaka ihany ny marina. Tsy misy afa-tsy lainga nentina nanakorontanana saim-bahoaka, ary novoizina …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tany amin’ny RN4 : Tafakatra telo ireo olona namoy ny ainy
Ankoatra ilay raim-pianakaviana maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra , afak’omaly tokony ho tamin’ny 02 ora tolakandro , dia fantatra fa namoy ny ainy ihany koa ny mpivady lehibe izay …Tohiny
Radio TV Miara-manonja : Lasa Radio Fanambarana?
Maro ireo mpanao politika na fikambanana mifandimby manao fanambarana ao anatin’ilay radio miara-manonjan’ny mpanohitra. Ny mahatsikaiky, dia saika ireo manam- pahefana teo aloha avokoa no manao fanambarana ao anatin’ity onjam-peo ity. CT sy CST teo …Tohiny
Fandrobana tany Mahitsy : Nidoboka am-ponja ireo jiolahy nangala-jaza
Voasambotra avokoa ireo andian-jiolahy miisa fito fantatra fa tompon’antoka tamin’ny fangalaran-jaza sy fanaovana takalon’aina zazavavavikely vao 5 taona rehefa nitazona ity farany nandritry ny efatra andro. Fantatra nandritry ny fakana am-bavany ireto farany tamin’izany fa …Tohiny
Mbola Rajaonah : Tapitra hatreo ny raharaha teny amin’ny Bianco
Ravinala Airports : Vita ny 25%-n’ny fanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato